Reply to Nature “လူတွေရဲ့သက်တမ်းတိုလာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Reply to Nature “လူတွေရဲ့သက်တမ်းတိုလာ”
Reply to Nature “လူတွေရဲ့သက်တမ်းတိုလာ”
Posted by Foreign Resident on Aug 1, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 20 comments
“လူတွေရဲ့သက်တမ်းတိုလာတာ” only happened in Myanmar alone
( Localized problem )
In fact, လူ့ သက်တမ်း becomes longer & longer.
Please see the following facts :
လူ့ သက်တမ်း in
Bronze Age and Iron Age = 26
Classical Greece = 28
Classical Rome = 28
Medieval Islamic Caliphate = 35
Medieval Britain = 30
Early Modern Britain = 25-40
Early 20th Century = 50-65
Current world average = 67.2 ( 2010 estimate )
I am very very very regret ( sorry ) to say,
Myanmar is the shortest လူ့ သက်တမ်း among our neighboring countries.
Even, shorter than Bangladesh.
Moreover, those facts are come from believable/trust worthy Organization = United Nation.
Recent လူတွေရဲ့သက်တမ်း ( life expectancy in years )
( according to United Nations World Population Prospects )
Japan = 82.6 ( World Ranking = 1 )
Australia =81.2 ( World Ranking =5)
Singapore = 80.0
UK = 79.4
USA = 78.3
China = 73.0
Thailand = 70.6
The whole world average life expectancy in years =67.2
India = 64.7
Laos = 64.4
Bangladesh = 64.1
Myanmar = 62.1 ( World Ranking = 148 )
I feel really really sad for our fellow countrymen.
အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်လို့ နားမလည်ပါ မြန်မာလိုရေးစေချင်ပါသည်
သက်တမ်းတွေ တိုလာပြီးဆိုတော့ ရတနာငါးပါးကို မမေ့ကြဖို့ သတိချပ်မိသွားတာပေါ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သက်တမ်းအတိုဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာတော့မယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတွေ သက်တမ်းတွေက လူ့ဘ၀မှာ ဆုတ်ယုတ်လာပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်လည်း ဘယ်သက်တမ်းထိနေနိုင်မလဲဆိုတာ မပြောနိုင်ပါဘူးလေ…
ဘာသာတရားက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများနေပေမယ့် သေချာလိုက်နာကြတဲ့သူ နည်းတာကြောင့်ရယ်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း(ရုပ်၊ စိတ်)နိမ့်ကျတာကြောင့်ရယ်၊ အသိပညာနည်းတာကြောင့်ရယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းတာကြောင့်ရယ်၊ အချင်းချင်း ခုတ်ထစ်နေတာကြောင့်ရယ်..၊….ရယ်၊…ရယ်၊
ရောဂါဘယတွေဖြစ်လို့ စောစောသေရတာတွေကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့
ဘာရောဂါမှ သိပ်မခံစားရဘဲ မြန်မာတွေ ၆၂ လောက်မှာသေကျတယ် ဆိုရင်တော့ (အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်) ဂျပန်လို သက်ကြီးရွယ်အိုအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေရတာမျိုးမရှိဘူး အရွယ်ကောင်းတုန်း အလုပ်လုပ်ကြ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ သေကြပေါ့
တိုင်းပြည်လူဦးရေ ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများက အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ် ဖြစ်နေမှာပေါ့
ဂျပန်ဆိုရင် တစ်ဦးချင်း ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၈၂ ဆိုတော့ တိုင်းပြည်မှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ရာခိုင်နှုန်းက များလာတယ်
သက်တမ်းတိုတာကောင်းသလိုလိုပဲ နော်nozomi။ အော် ဒါတောင် ဘာကြောင့်များသက်တမ်းရှည်အောင်ကြံဆောင်နေကြလဲမသိတာနော်။
သက်တမ်းတိုတယ်သာပြောတယ် … များလိုက်တဲ့ လူတွေ ဟိုနေရာဆိုလည်း တိုးလို့ ကြိတ်လို့ ဒီနေရာဆိုလည်း တိုးလို့ကြိတ်လို့ …. သေကို မသေနိုင်ဘူး … လူဦးရေ ထူထပ်လွန်းတယ်
ငယ်တုန်း ကတော့ သေရမှာ ကို သိပ်မကြောက်ဘူး
အရွယ်ရောက်လာမှ သံယောဇဉ်တွေ ၊ စီးပွား ဥစ္စာ တွေ ရှိလာမှ
သေရမှာ ကြောက်လာကြ သလို ပဲ ။
ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့…ကလေးတွေဟာ.. အသက်၁၀၀ နေရတယ်ဆိုသာ သာမန်ဖြစ်လာမယ်လို့.သတင်းတပုဒ်ကဆိုတယ်..။ သတင်းအချက်အလက်နဲ့..ဆေးသိပ္ပံတိုးတက်မှုကို အကဲခတ်ကြည့်ရင်လည်း.. လူတွေ ပိုကျမ်းမာပြီး.. အသက်တွေရှည်..အနာတွေလျှော့..။ ပဒေသာပင်တွေကနေ ..လိုရာဆွတ်နိုင်ကြသူတွေများလာတာတွေ့နိုင်ကြမယ်..။
မြန်မာတွေပြောပြောနေတဲ့.. ဆုတ်ကပ် ဆိုတာ… ရှေးခေတ်က..သချာင်္မတတ်သူတွေရဲ့.. စိတ်ကူးယဉ်ခြောက်လုံးတွေဖြစ်တယ်လို့.. စွတ်စွဲပြောလိုက်ပါတယ်..။
WebMD Health News: “Best, Worst Countries for Life Expectancy.”
WebMD Health News: “Life Expectancy Still Heading Higher
မြန်မာတွေပြောပြောနေတဲ့.. ဆုတ်ကပ် ဆိုတာ…
မြန်မာတွေ အတွက်ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်
ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှ လူတွေကတော့
အဲ့ဒီသိပ္ပံတိုးတက်လာလေလေ လူတွေဒုက္ခရောက်လာလေပဲ လို့ တွေးမိတယ်
ဘာကလီးရား ညာကလီးရားတွေ မြင်နေကြားနေရလို့ ဝင်ရှုပ်ကြည့်တာ
ရန်ကုန်မြို့ ကတော့ တော်တော်ညှော်နေပီ ဘယ်နာရှော့ဖြစ်နေလဲတာမသိတာ
ကျန်းမာရေးကောင်းလို့ … လူဦးရေ ထူထပ်ပြီး အသက်ပိုရှည်လာလျှင် … ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ရှုပ်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော် … ။
ကြေးခေတ် ၊ သံခေတ်တွေကတော့ ဝေးလို့ မမှီလို့မပြောတော့ပါဘူး။ အနီးစပ်ဆုံး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၅၀ လောက်ကို ပြန်ကြည့်ကြရအောင်။
…Japan = 82.6 ( World Ranking = 1 )…
အခုခေတ်မှာ သက်တမ်း အရှည်ဆုံးဂျပန်ဟာ 82.6 နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ လောက်က မြန်မာတွေ သက်တမ်း 90-100 ရှိနေချိန်မှာကော ဂျပန်က 82.6 ပဲလား။ဒါမှမဟုတ် 70- ကနေ 82.6 ကိုတက်လာတာလား၊၁၀၀ကနေ 82.6 ကိုကျသွားတာလား။
မြန်မာနိုင်ငံက သက်တမ်း အတိုဆုံး ဖြစ်ပေမဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေလည်း အနဲနဲ့ အများ တော့ သက်တမ်းလျှော့ပါလိမ့်မယ်။
သက်တမ်းတက်လာဖို့ကတော့ ကျနော့်အမြင်နဲ့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
…လူတွေ ပိုကျမ်းမာပြီး.. အသက်တွေရှည်..အနာတွေလျှော့…
AIDS ,H1N1,စတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ရောဂါဆိုးတွေဟာလည်းတခုပြီးတခုပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။
…..မြန်မာတွေပြောပြောနေတဲ့.. ဆုတ်ကပ် ဆိုတာ…
ကြက်တုတ်ကွေး ၊ ငှက်တုတ်ကွေး ၊ ဆူနာမီ၊ နာဂစ်၊ မီးတောင်ပေါက်ခြင်း၊ နယူးကလိယဓါက်ပေါင်းဖို ပေါက်ကွဲခြင်း စတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ကပ်ဘေးတွေ တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်လာတာ ကို တိုးတက်တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါ့မလား။
…ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့…ကလေးတွေဟာ.. အသက်၁၀၀ နေရတယ်ဆိုသာ သာမန်ဖြစ်လာမယ်လို့.သတင်းတပုဒ်ကဆိုတယ်…
သူတို့ထင်မြင်ချက်တွေကို ရေးတာဖြစ်လို့ မယုံကြည်ပါ။
သူ့ထက်သေချာပြီး အထောက်အထားတွေနဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အဆိုတခုကို ကျောင်းမှာတောင်သင်ခဲ့ရသေးတယ်။ ချားလ်ဒါဝင်ရဲ့လူဆိုတာ မျောက်ကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာကို…သူလဲသေသေချာချာသုသေသနလုပ်ပြီး အထောက်အထားနဲ့ တင်ပြခဲ့တာပဲ။ လူဆိုတာ မျောက်ကဆင်းသက်တာဆိုရင် တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲကမျောက်တွေ ဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ တချိန်မှာ လူဖြစ်လာနိုင်မလား။ တဖြေးဖြေးနဲ့ မျောက်မျိုးနွယ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး လူတွေချည်း ဖြစ်လာနိုင်မလား။
လူတွေ့ရဲ့ ဘိုးဘွား ဘီဘင်တွေဟာ မျောက်တွေ ဖြစ်နိုင်မလား။ ဗုဒရဲ့ အဘိဓမာတရားအရ တိ၇ိစ္ဆာန်ဟာ ဒွိဟိတ် သန္ဓေဖြစ်ပါတယ်။လူဟာ တိဟိတ် သန္ဓေဖြစ်ပါတယ်။
I don’t know, which Data source you was referred.
“ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ လောက်က မြန်မာတွေ သက်တမ်း 90-100 ရှိနေချိန် ”
But, I found out some information from Myanmar Government, United Nations & World Bank.
(aa) According to prestigious World Bank Data :
Life expectancies (လူ့ သက်တမ်း ) of Myanmar are accordingly.
1960 = 44
1970 = 51
1980 = 57
1990 = 59
Kindly see the following links,
(bb) According to Myanmar Government’s information,
( Page-14, Myanmar Health Statistics 2010 Book, issued by Ministry of Health)
Life Expectancies (လူ့ သက်တမ်း ), 1988 – 2007, Myanmar Rural area,
1988 = 56.2 ( Male )
2003 = 61.5 ( Male )
2007 = 63.2 ( Male )
Kindly see the following link
(cc) According to United Nation Development Programme (UNDP) information,
Life expectancies (လူ့ သက်တမ်း ) at birth for Myanmar are,
1980 = 57.5
1990 = 58.9
2000 = 59.9
2010 = 62.7
Kindly see the following link,
Concerning “တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲကမျောက်တွေ ဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ တချိန်မှာ လူဖြစ်လာနိုင်မလား”
( It’s too long to explain here )
Kindly read the Evolution Theory
( which is the combined effect of natural selection, genetic drift, mutation & gene flow )
I think, our lord Buddha never said recent Time/Era is “ဆုတ်ကပ်”
They are just rumors ( gossips ).
ဘယ်လိုဘဲပြောကြပါစေ။(၁)ဇာတိ(၂)ဇရာ (၃)ဗျာဓိ(၄)မရဏ ကိုမည်သူတဦးတယောက်မျှလွန်ဆန်နိုင်ပါမည်မဟုတ်ပေ
Dear Foreign Residence,
သူတို့ကောက်တဲ့ data တွေဟာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သက်တမ်းဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ်မှာ အဓိပါယ်ဖွင့်တာ ကွာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကောက်ယူတဲ့သက်တမ်းဆိုတာ average age ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ -သေတဲ့သူ ၃ ယောက်ကို စာရင်းကောက်ရင် အသက် ၁၀၀ က ၂ဦး မွေးခါစ၁ နှစ်သားက ၁ ဦး ဆိုရင် သူတို့တွက်မဲ့ သက်တမ်းဟာ (100*2+1)/3=67နှစ်ရပါမယ်။
သေတဲ့သူဟာ အသက်၁၀၀ က ၁ဦး၊ မွေးခါစ ၁နှစ်သားက ၂ဦးဆိုရင် သူတို့တွက်မဲ့သက်တမ်းဟာ
သူတို့ တွက်တဲ့ နည်းဟာ jumping များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစုကတော့ ဒီနည်းကိုပဲ သုံးကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့တွက်နည်းနဲ့ သက်တမ်းတိုး တယ်ဆိုတာကို ကျနော်သိသလောက်တော့ ခလေးသူငယ် သေဆုံးမှု နဲပါးလာတယ် ၊အသက်ကြီးမှ သေဆုံးသူတွေ များလာတယ် လို့ ယူဆပါတယ်။
ကျနော်ဆိုလိုတဲ့သက်တမ်းဆိုတာက သက်တမ်းစေ့နေသူတွေကို ဆိုလိုတာပါ။
ဥပမာ- လူတယောက်ဟာ အသက်၂၀ နဲ့ သေသွားရင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေရတယ် သက်တမ်းစေ့ မနေရဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။
၁၉၆၀=၄၄, ဆိုတာတွေကို ကျနော့်ရဲ့ သက်တမ်းအမြင် အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အဲဒီနှစ်တွေမှာ အသက် ၆၀-၇၀ အရွယ်တွေ အများကြီးရှိနေလို့ပါပဲ။ ၄၄နှစ်နဲ့ သက်တမ်းစေ့တယ်ဆိုတာကို လက်မခံနိုင်ပါ။
မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလဲ ။ ကျား ဘ၀ မ ဘ၀ ကို ၊ မ ဘ၀က ကျားဘ၀ကို ပြောင်းလဲ တာကိုတောင် ကြုံတောင့်ကြုံခဲ တွေ့ဖူးတာ တသက်မှာ ၁၀ ကြိမ်ထက်မပိုဘူးထင်ပါတယ်။ဖြစ်ခဲပါတယ်။ မျောက်က လူဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် မျောက်မက လူကလေးတွေကို မွေးမှာလား။ မျောက်က နေ အလိုလိုနေရင်း ဂျင်းပြောင်ပြီး လူဖြစ်လာမှာလား။ မျောက်ကို ဘိုးဘေး တော်ခဲ့တဲ့ လူတွေလဲ ခုထိ မရှိသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီ သီအိုရီကို နားလည်သလောက် တဖြေးဖြေးနဲ့ မြောက်ကနေ ပုံစံနဲနဲချင်းစီ ပြောင်းပြီး နောက်ဆုံးမှာ လူဖြစ်လာတာ လို့ အကြမ်းဖျင်း နားလည်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် မျောက်ကို ဘိ်ုးဘေးတော်သူတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ။ မျောက်ကနေ လူဖြစ်လာပြီ ဆိုပါတော့ ဒါဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ မျောက်မျိုးနွယ်တွေ ပျောက်ကွယ်မသွားရတာလဲ။ မျောက်ကမျောက် ၊ လူကလူပါ။ မျောက်ကလူနဲ့နီးနီးစပ်စပ်တူတဲ့ အတွက် အသိဥာဏ်လဲ တခြားတိရိစ္ဆာန်တွေထက်ပိုရှိတဲ့ အတွက်
အထင်မှားသွားတာ စိတ်ကူယဉ်ဆန်သွားတာလို့ ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ တရား အရတော့ တိဟိတ် သန္ဓေ လူသားနဲ့ ဒွိဟိတ် သန္ဓေ တိရိစ္ဆာန် ဘယ်လိုမှ မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ လင့်ကိုဖွင့်ကြည့်ပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်းနားမလည်ပါ။
(1) “လူ့သက်တန်းဟာ ၁၉၆၀=၄၄, ဆိုတာတွေကို
ကျနော့်ရဲ့ သက်တမ်းအမြင် အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ပါ”
It is your option ( your freedom to believe )
(2) မျောက်ကို ဘိုးဘေး တော်ခဲ့တဲ့ လူတွေလဲ ခုထိ မရှိသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
This process takes million of years.
(3) ဘာဖြစ်လို့ မျောက်မျိုးနွယ်တွေ ပျောက်ကွယ်မသွားရတာလဲ။
There are so many monkey variants ( eg, chimpanzee, gorilla, orangutan, — )
(4) Lord Buddha never said all လူသား are တိဟိတ်
လူသား consists of both တိဟိတ် & ဒွိဟိတ်
တိဟိတ် means “have ability to retain enlightenment of dhamma”
( eg, Ya han tar is တိဟိတ်)
ဒွိဟိတ် means “do not have ability to retain enlightenment of dhamma”
( eg, ဆွံ့အ နားမကြား လူသား is ဒွိဟိတ် )
တိရိစ္ဆာန် = အဟိတ်
My personal opinion/perspective,
Even though I am strong believer of Buddha,
But, when discussing in logical ground,
” This is true because of Buddha said, Allah said, God said, My father said ”
is very silly, no logical & inappropriate.
FR ရေ။ တိရိစ္ဆာန် ဆိုတာ အ ဟိတ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။
တော်တော်နောက်တာပဲ ပြောခဲ့ကြတာဖြင့် August ဆန်းက
အခု November ရောက်တော့မယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..။ တလောလေးက ကြည့်လိုက်ရတဲ့.. discovery တီဗီရဲ့.. သိစရာ ဇတ်လမ်းလေး ကြည့်စေချင်လို့ပါ..။
Curiosity Videos: Can you live forever? တဲ့..။ အင်မတန် အတွေးပွားစရာတွေပါတယ်.။
လူသားက မသေတဲ့သူဖြစ်သွားအောင် သိပ္ပံနဲ့ လုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်မှာတွေ ပြသွားတာ..။